Principle of non-woven bag manufacturers and suppliers | Yixin
bacaha Non-xidhka daabaca
Non-xidhka daabaca dhar
Mabda'a bac non-leh tolmo wanaagsan
dhar non-leh tolmo wanaagsan waa dhar a non-leh tolmo wanaagsan oo si toos ah isticmaalaan oo tuban-polymer sare, fiiloyin gaaban ama filaments si ay u sameeyaan wax soo saarka novel buunshada isagoo jilicsan, qaab permeable iyo planar by habab kala duwan web sameynta iyo farsamooyinka xoojinta. Faa'iidooyinka bacaha non-leh tolmo wanaagsan marka la barbar dhigo bacaha balaastikada ah dhaqanka: bacaha non-leh tolmo wanaagsan waa raqiis, bay'adda u fiican, wax ku ool ah, si ballaaran loo isticmaalo, iyo in ay jagooyinka advertising caan ah. Khusayso dhammaan noocyada kala duwan ee hawlaha ganacsiga iyo bandhigyo iyo alaabtaada, waa advertising ugu saxsan iyo hadiyado dhiirrigelin waayo, shirkadaha iyo hay'adaha.
difaan Non-leh tolmo wanaagsan waa waxyaabaha aan u baahnayn habka jare ah oo la sameeyey oo dhar maro-sida, sidoo kale loo yaqaan dhar non-leh tolmo wanaagsan. Sababta oo ah waxa kaliya ee loo baahan yahay in cabbiri ama aan kala sooc lahayn tolmo ah macdantaa gaaban ama filaments si ay u sameeyaan qaab-dhismeedka web a, ka dibna sii xoojiyeen by farsamo lagala kulmo ama kiimiko hababka, kaamerada. Inta badan oo ka mid ah bacaha nonwoven ka samaysan yihiin dhar nonwoven spunbonded.
Si aad u fudud u saaray, oo dhar non-leh tolmo wanaagsan ma leh tolmo wanaagsan iyo wada taxeen oo ka mid dun, laakiin macdantaa waxaa si toos ah addoonsi by yahay jirka, sidaa darteed marka aad hesho magac dheg in dharkaaga Marka aad ogaato, ma waxaad sawiri kartaa a thread hal. dhar Nonwoven jebiyo dhex mabda'a dharka dhaqanka, iyo leedahay sifooyinka of socodka gaaban nidaamka, xawaaraha wax soo saarka si degdeg ah, wax soo saarka sare, kharash yar, codsiga ballaaran iyo qalab badan oo ceeriin.
Laminating bac non-leh tolmo wanaagsan, wax soo saarka ah ayaa ansixiyey ridaya habka, adag oo adag, oo aan xabag geedi socodka biirsaday ah, jilicsan in la taabto, dareen caag ah ma, ma maqaarka cuncun, ku haboon shabaqa la tuuro caafimaad hal, go'yaasha sariirta, la saarto qalliinka, wax soo saarka ee dhar badbaadin, dhar badbaadin, daboolida kabaha, iyo articles kale ee nadaafadda ilaaliya; sida bac maro waxa loo yaqaan bac dahaaray non-leh tolmo wanaagsan.
waqti Post: Dec-06-2018
Cinwaankaaga: dabaqa koowaad ee Tanwutun Village, Mishui Street, Gaomi City, Weifang City, Gobolka Shandong
bacaha Baakadaha Non-dhar
© Copyright - 2010-2019: Dhamaan Reserved Rights.